तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूको धेरै चरणहरू अगाडि रहन नयाँ तरिकाहरू - Semalt बाट SEO उपकरण
तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूको धेरै चरणहरू अगाडि रहन नयाँ तरिकाहरू - Semalt समर्पित SEO ड्यासबोर्ड
एक बजेट सचेत व्यवसाय मालिकको रूपमा, तपाइँ लगातार आफ्नो प्रतिस्पर्धा भन्दा धेरै चरणहरू रहनको लागि नयाँ तरिकाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। र विश्वको हालको राज्यको साथ, कुनै पनि व्यवसाय बाँच्नको उत्तम तरिका भनेको तपाईंको बहुसंख्यक अपरेशन अनलाईनमा सार्नु हो। तर सम्पूर्ण उद्योग उही विश्व दर्शकहरु लाई अपील गर्न को लागी, भीड मा हराउन सजिलो छ। गुगल जस्ता खोज ईन्जिनहरूले उनीहरूको समयको लागि नयाँ र सबै भन्दा सान्दर्भिक सामग्री पाउँदछन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न निरन्तर आफ्नो स्तर निर्धारण गर्दैछन्।
तपाइँ एसईओ (सर्च इञ्जिन अप्टिमाइजेसन) को साथ मद्दतको लागि उबरसगेस्ट वा आहरेफको सदस्यता खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, तर सस्तो विकल्प पनि पैसा सिink्ग हुन सक्छ यदि तपाइँलाई के खोजिरहनु भएको छ भन्ने थाहा छैन भने। यी कार्यक्रमहरूको एक धेरै पेशेवर मार्केटरहरु को लागी डिजाइन गरीएको छ; व्यक्तिहरू जुन यो डेटालाई हेरफेर गर्न पहिले नै जान्दछन्। त्यस्तो अनुभवको साथ कसैलाई काममा लिनको लागि, तपाईंले एक बर्षमा कम्तिमा si० ग्रान्ड तिर्नु पर्छ! र त्यो कलेजको बाहिर कसैको लागि हो।
त्यसोभए कसरी बजेटमा सानो व्यवसाय मालिकले यो मूल्यवान जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछन् जबकि उनीहरू जाने मा डाटालाई कसरी हेरफेर गर्न सिक्छन्? Semalt's समर्पित SEO ड्यासबोर्ड उत्तर हो जुन उनीहरू खोज्दैछन्! प्रति डोमेन नामको लागि मात्र $ १० को लागी तपाईले पढ्न सक्ने सबै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जबकि पढ्ने सामग्रीमा सजीलो पहुँच छ जुन तपाईंलाई पढ्ने र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाउँदछ। प्रक्रियामा सचेत बजेट बाँकी रहँदा तपाईंलाई आवश्यक पर्ने गुणवत्ताको जानकारी हुन सक्छ!
तर पहिलो, हामीले खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन के हो परिभाषित गर्नुपर्दछ - यो तपाईंको पृष्ठमा सामग्री र टाइपोग्राफी अध्ययन गरेर तपाईंको वेबसाइटमा जाने क्वालिटी र मात्रा ट्र्याफिकको सक्रिय सुधार हो। सामान्यतया, एउटा खोज इञ्जिनले तपाईको पृष्ठहरूलाई ती सबैको बिरूद्ध मूल्या rate्कन गर्दछ जुन तिनीहरूको डेटाबेसमा उनीहरूको क्रॉलरहरूद्वारा स collected्कलन गरिएको जानकारीको साथ हुन्छ। तपाइँ क्रलरहरूलाई तपाइँको वेबसाइटको छिट्टै भित्र पस्न र मद्दत गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसैले तपाईलाई इन-बाउन्ड र आउट-बाउन्ड लिंकहरूको आवश्यकता पर्दछ। र यो केवल मापदण्डहरू होइनन् कि तिनीहरूले तपाईंको पृष्ठमा दर्जा दिन्छन्; तिनीहरूले तपाईंको खोजशब्द घनत्व, व्याकरण, डिजाइन, सामग्री उमेर ...
लामो कथा छोटो बनाउनको लागि, उनीहरूले सबै चीज हेर्नेछन् र तपाईंको कीवर्ड चयनसँग मेल खाने अन्य सामग्रीसँग तुलनाको लागि आफ्नो केन्द्रीय केन्द्रमा पठाउँनेछन्। केन्द्रीय हबले सबै सामग्री दिनेछ यसले SERP स्कोर भण्डार गरेको छ। SERP को मतलब खोज ईन्जिन परिणाम पृष्ठ; यो क्रम हो जुन तपाईंको सामग्री एक विशेष कीवर्ड खोजीमा देखा पर्दछ जब प्रयोगकर्ताले त्यो कुञ्जी शब्दका लागि खोजी कार्य गर्दछ। स्वाभाविक रूपमा, सामग्री यस उमेरको रूपमा SERP मा ड्रप हुनेछ, किनकी तपाइँले लगातार नयाँ सामग्री सिर्जना गर्नु पर्छ। एक सफल लेख तपाइँको विशिष्ट खोज टर्मको पहिलो पृष्ठमा अवतरण हुनेछ।
यो डरलाग्दो कार्य जस्तो लाग्न सक्छ, तर सही उपकरणले तपाईंलाई खाली ठाउँहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईं ना the्गो आँखाले कहिल्यै देख्न सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईंलाई Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्ड जस्ता उपकरणको आवश्यकता छ - यसले तपाईंलाई यो डाटा पढ्ने र हेरफेर गर्ने तरिका सिकाउँदछ, ताकि तपाईंको वेबसाइट सफल बन्न सक्दछ। तपाईले ल्याउनु पर्छ सबै तपाईको फाँटमा तपाईको विशेषज्ञता र SEO प्रक्रिया सिक्ने खुला दिमाग।
त्यसोभए तपाईं कसरी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा, साइन अप गरेर! वेबसाइटले सोधेको पहिलो चीज: तपाई कसरी साइन अप गर्न चाहानुहुन्छ? तपाईं गुगल, फेसबुक वा खाता सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले गुगल वा फेसबुक चयन गर्नुभयो भने, समर्पित एसईओ ड्यासबोर्डले त्यस साईन ईनबाट सबै प्रासंगिक जानकारी तान्नेछ र तपाईंको खाता विवरणमा यसलाई लागू गर्दछ। यदि तपाईं Semalt तपाईंको व्यक्तिगत डाटा भर्नेसँग ठीक हुनुहुन्न भने, तपाईं खाता खोल्न सक्नुहुनेछ र आफैमा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंलाई भविष्यमा यो जानकारी ठीक गर्न आवश्यक छ भने, तपाईं माथिको दाहिने-कुनामा तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम बटन थिचेर तपाईंको खाता जानकारी पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ Semalt यो परिचित विधि स्थापना गर्नुभयो तपाईंको छिटो भित्र पस्न र तपाईंको वेबसाइटमा काम सुरु गर्नको लागि। ।
प्रयोग गर्न सजिलोको कुरा गर्दै - तपाईंको प्रयोगकर्तानाम बटनको बाँयामा भाषा चयन बटन हो। तपाईं Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्ड एघार विभिन्न भाषामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस बटनको बायाँपट्टि बबल आइकन छ जसमा तीन थोप्लाहरू हुन्छन्; त्यो यस्तो छ कि तपाईं डेडिकेटेड एसईओ ड्यासबोर्डको साथ तपाईंसँग हुन सक्ने कुनै पनि मद्दतको लागि Semalt बाट एसईओ पेशेवरलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले तपाईंलाई जति सक्दो चाँडो सम्पर्क गर्नेछ। यदि तपाईं तत्काल मद्दत चाहनुहुन्छ भने, प्रत्येक पृष्ठमा निलो "पृष्ठ हेर्नुहोस् गाइड" बार छ जुन तपाईंसँग जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यसलाई पछि सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ र माथि दायाँ कुनामा प्रकाशको बल्ब आइकन थिचेर जानकारी पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि सावधान! तपाईं एक पटक मात्र गाइड मार्फत जान सक्नुहुन्छ। भाग्यवस, यी सबै गाईडहरू स्वत: गतिमा छन्। त्यसैले निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग तपाईंको नोटपैड खुला छ, तपाईं नोटहरू लिन सक्नुहुनेछ।
तपाइँलाई सुधार गर्न के चाहिन्छ भनेर बाहिर जान्नको लागि, Semalt ले दुई ट्र्याकि methods विधिहरू सुरू गरेको छ - गोलाकार प्रतिशत ग्राफ र रंगीन बुलबुले।
गोलाकार ग्राफका लागि - प्रत्येक ग्राफले त्यो निर्दिष्ट सेक्सन १०० र ० बीचको श्रेणी दिन्छ। १००- means ० को मतलब त्यो सेक्शन अद्भुत देखिन्छ,---50० को मतलब त्यो सेक्शनले केही सुधार प्रयोग गर्न सक्दछ र -0०-० यसको मतलब तपाईले गहिरो गोता लिन आवश्यक छ। यस मुद्दामा
गोलाकार बुलबुले - हरियोको अर्थ तपाइँ जान तयार हुनुहुन्छ, सुन्तला रंगको मतलब तपाईले केही सुधार प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र रातो मतलब तपाईले यस मुद्दामा गहिरो गोता लिन आवश्यक छ।
धेरै सजिलो, सही? के यसको मतलब तपाइँ समर्पित SEO ड्यासबोर्ड अन्वेषण गर्न तयार हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने, तब माथिल्लो बायाँ कुनामा दुई लाइनहरू थिच्नुहोस् र सँगै पछ्याउनुहोस्।
आठ विकल्पहरू जुन तपाईंको व्यवसायलाई सुधारको लागि आवश्यक पर्ने परिणामहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ
यस सूचीले तपाईंले समर्पित एसईओ ड्यासबोर्डमा राख्नु भएको सबै डोमेनहरू समात्छ, त्यसैले तपाईं सजिलै बिभिन्न डोमेनहरू बीच वैकल्पिक गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरीकाले, तपाइँ तपाइँको संख्या र तपाइँको प्रतिस्पर्धा को संख्या मा नजर राख्न सक्नुहुन्छ। के तपाइँ यो उपकरणमा तपाइँको प्रतिस्पर्धा हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर उल्लेख गर्न बिर्सनुभयो? Semalt ले कसले डोमेनको स्वामित्व राख्दैन भनेर सोध्यो, जसको मतलब तपाई जुनसुकै वेबसाईटमा हेर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ जबसम्म तपाई प्रति डोमेन $ १० भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ। यो कसरी समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड को लागी तपाइँ तपाइँको प्रतिस्पर्धा को अगाडि रहन मद्दत गर्दछ।
वेबसाइट बटन थप्नुहोस्
र यो तपाईं वेबसाइट सूची पप्ट गर्नुहोस्। तपाइँ एक पटकमा एक डोमेन राख्न सक्नुहुन्छ, धेरै डोमेनहरू एक पटकमा टाइप गर्नुहोस् वा तपाईले अध्ययन गर्न चाहानु भएको सबै डोमेनहरूको साथ सूची अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईका खोजहरूलाई कम गर्नका लागि तपाईले केहि कुञ्जी शब्दहरूलाई पनि चलाउन सक्नुहुन्छ।
â € ¢ ड्यासबोर्ड
यसले तपाईंलाई प्रत्येक डोमेनको द्रुत सिंहावलोकन दिन्छ जुन तपाईं आफ्नो वेबसाइट सूचीमा राख्नुहुन्छ।
तपाईंले माथिको नमूनाबाट देख्न सक्नुहुनेछ, Kmart र CVS दुबै एसईओ दृष्टिकोणबाट धेरै खराब गर्दैछन्। खराब एसईओ स्कोरको साथ पनि, त्यहाँ यस जानकारीका साथ तपाईं धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी हेर्न सकिन्छ तिनीहरूले कसरी उनीहरूको कीवर्डहरू TOPS मा प्रयोग गरिरहेका छन् र निर्धारण गर्नुहोस् कि के नगर्ने। कहिलेकाँही के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउनु भनेको सफल व्यवसायलाई हेर्नु जत्तिकै फाइदाजनक हुन सक्छ।
यसबाट तपाई प्रत्येक मेट्रिकमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ ती संख्याहरूमा गहिरो गोता लिन।
SERP क्लिक गर्दा तीन विकल्पहरू प्रकट गर्दछ:
TOPS मा कीवर्डहरू
प्रत्येक विकल्पले तपाइँको वेबसाइटको ठूलो अंश तोड्नेछ र तपाइँ कसरी सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे सल्लाह दिनुहुन्छ। यदि सहि रूपमा प्रयोग भयो भने, यो जानकारीले तपाईंलाई व्यवहार्य ग्राहकहरूको स्थिर स्ट्रिममा मार्गदर्शन गर्नेछ।
वेबपृष्ठ विश्लेषकले तपाइँको वेबसाइटले माथि उल्लिखित ट्र्याकिंग विधाहरूको प्रयोग गरेर कसरी प्रदर्शन गरिरहेको छ भनेर बताउनेछ:
सबै लेखा परीक्षा
सफल अडिटहरूले तपाईंलाई के काम गरिरहेको देखाउँदछ, चेतावनीले तपाईंलाई सुधारको आवश्यकता देखाउँदछ, त्रुटिहरू तपाईंलाई देखाउँदछ कि अब के गर्नु पर्ने हुन्छ र आधारभूत जानकारीले तपाईंलाई सबै ग्राहकहरू के देख्छन् देखाउँदछ। सबै लेखा परीक्षा ले सबै चीजको पूरा ब्रेकडाउन दिन्छ।
सामग्री दुई श्रेणिहरु मा टूट छ:
यी दुबै विकल्पहरूले तपाईंको सामग्री कत्ति वास्तविक छ भनेर हेर्नेछ। दुबै बिच सब भन्दा ठूलो भिन्नता भनेको पृष्ठ विशिष्टताले एक विशेष पृष्ठमा केन्द्रित गर्दछ र वेबसाइट विशिष्टताले तपाईंको पूरा वेबसाइटमा प्रयोग हुने कुञ्जी शब्दहरूमा फोकस गर्दछ।
यसले तपाईंलाई भन्नेछ कि तपाईंको पृष्ठ कति छिटो विभिन्न उपकरणहरूमा लोड हुन्छ, र कसरी माथि वर्णन गरिएको मापन प्रयोग गरी तपाईंको मुद्दाहरू ठीक गर्ने भनेर देखाउँदछ।
तपाईं आफ्नो रिपोर्टहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ पाँच विकल्प हुनेछ:
रिपोर्ट सिर्जना गर्नुहोस्: सेट मेट्रिकको आधारमा रिपोर्ट सिर्जना गर्नुहोस्
डेलिभरी अनुसूची सिर्जना गर्नुहोस्: स्वचालित "रिपोर्ट सिर्जना गर्नुहोस्" कार्य
डेलिभरी अनुसूची रिपोर्ट गर्नुहोस्: संकेतित मानिसहरूलाई ईमेल रिपोर्टहरू
सेतो लेबल टेम्प्लेट: सिर्जना गरिएका रिपोर्टहरूमा तपाईंको लोगोहरू थप्नुहोस्
वितरण टेम्प्लेट: ईमेल गरिएका रिपोर्टहरूमा तपाईंको लोगोहरू थप्नुहोस्
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, Semalt गरेको समर्पित SEO ड्यासबोर्ड एउटा सानो व्यवसाय मालिकसँग अनलाइन क्यापिटलाइज सुरु गर्न सबै आवश्यक छ - एक मूल्य कुशल उपकरण जसले तपाईंलाई पेशेवर मद्दतको लागि सजिलो पहुँचको साथ डाटालाई कसरी हेरफेर गर्न सिकाउँदछ। मँ अझै पनी विश्वास गर्न सक्दिन कि यो सेवाको लागत मात्र हो $ १० एक डोमेन!